u-AB ubambelela yedwa njengoba i-Australia ihamba phambili
i-Australia ibambe kwaqina kumdlalo wokuqala we-Sunfoil Test kudlalwa e-Sahara Stadium Kingsmead ngoLwesihlanu njengoba ama-Standard Bank Proteas ehlulekile ukugwema umphumela we-follow on futhi basondele kumphumela wokuqala wezivakashi osukwini lwesibili.
u-AB de Villiers umeyedwa njengoba engekho omunye umdlali oshayayo ohlale isikhathi eside ozohlanganisa i-partnership naye.
Umonakalo wokuqala wenziwe ukuphosa nge-spin u-Nathan Lyon bese kwaba ikhono lika-Mitchell Starc le-reverse swing ngebhola elindala.
u-De Villiers uphucwe ithuba lokuthola ikhulu lakhe lesithupha edlala ne-Australia njengoba ephelelwe azoshaya nabo (71 runs off 127 balls, 11 fours) njengoba ama Proteas ekhushwe wonke enama-runs angu-162 kuma-overs angu-51.4. Okushiye ama-Proteas nama-runs angu-189 kwi-innings yokuqala, i-Australia izoqala i-innings yabo yesibili ekuqaleni kosuku lwesithathu kusasa ekuseni.
u-Aiden Markram uthole u-32, ama-runs esibili amakhulu kuma-Proteas.
u-Starc uqede i-innings eno-5/34 kuma-overs angu-10.4 kwathi u-Lyon wathola u-3/50.
u-Starc ube nomdlalo omuhle njengoba i-partnership ye-wicket yesishagalombili yama-runs angu-49 no-Mitchell Marsh idlale indima enkulu.
Njengoba u-Marsh eshodelwe ama-runs amane ukuthola ikhulu lakhe lesithathu kuma-Test (96 off 173 balls, 13 fours, 1 six) i-Australia ikwaze ukuhlanganisa ama-runs angu-100 kuma-partnership amathathu okugcina futhi lokho kwenze umehluko omkhulu kabi kumphumela ama-Proteas abhekene nawo. Umphumela ongu-351 ubungaphezulu kancane kwe-par, uma ucabanga ubuholoholo be-pitch kanye i-spin ebesikhona umdlalo wonke.
u-Keshav Maharaj uthole i-five-wicket haul yakhe yesine (5/123 kuma-overs angu-33.4) futhi akuthukwanga ngesikahthi u-Steve Smith ephosisa u-Lyon kubahlaselayo kwi-Australia ngasekuqaleni kwe-over yesishagalombili. Usheshe wathola impumelelo, wakhipha u-Dean Elgar no-Hashim Amla emabholeni awaphosile okuqala amahlanu futhi ama-Proteas awaphindanga abuyela esimeni.
i-Sunfoil Education Trust (SET) okwamanje isathole u-R132 000 ezinsukwini zokuqala ezimbili zomdlalo. Lokhu umphumela ovele kuma-boundaries no-six okushayiwe kanye ngama-wicket akhishwe iwona womabili amaqembu.
u-Maharaj uthole ama-wicket abalulekile kumdlalo wakhe wokuqala e-Kingsmead Ama-Proteas ne-Australia balungiselela ukuqhubeka nempi yabo yekhilikithi u-Morkel uzothatha umhlalaphansi kwikhilikithi yamazwe emuva kwi-series ne-Australia Ama-Proteas angasabi afuna ukunqoba i-series Ama-Proteas esifazane afuna ukuqeda ngamandla u-Cummins uyaqhakaza ngokushaya kanye nokuphosa Umlingo ka-Klaasen usiza ama-Proteas alinganise i-T20 series Imvula inqoba umdlalo wesine we-Women’s T20 e-Centurion Ama-Proteas esifazane alindele ukulinganisa i-T20 series Isimo sama-Proteas alimele Ama-Proteas abheke ukudlala kangcono kumdlalo okumele bawunqobe